In la raadiyo shaqo | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / In la raadiyo shaqo
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay in la raadiyo shaqo. In la raadiyo way adkaan kartaa oo qaadan kartaa wakhti dheer. Adigu waad ogtahay inaad doonayso shaqo, laakiin laga yaabee in aanad garanayn waxa aad doonayso ama ka shaqayn karto. Halkee ayaa laga helaa shaqo banaan iyo sidee ayaa qofku u codsadaa? Laga yaabee inaad waayo-aragnimo u leedahay xirfad aad doonayso inaad sii wado ku shaqaynteeda? Laga yaabee inaad doonayso inaad ku shaqayso wax aanad horey u sameyn?
Qoraalkan waxaad ku akhrin doontaa sida qofku u raadiyo shaqo iyo nooca caawimaad ee qofku heli karo dhinaca shaqo raadintiisa.
Xagee ayaa dadku la xiriiraan si loo helo caawimaad in la helo shaqo gudaha dalka ama dalalka aad horey ugu noolayd?
Miyaad waayo-aragnimo u leedahay wax la mid ah Xafiiska Shaqada?
Waxaad shaqo u raadin kartaa qaabab kala duwan:
Adigu waxaad booqan kartaa Goobta shaqooyinka banaan (Platsbanken) ee Xafiiska Shaqada bogeeda intarnatka kana raadin kartaa shaqo dhanka ogeysiisyada ku saabsan shaqooyinka banaan.
Waxaadla xiriiri kartaa shirkadaha shaqaalaysiinta. Shirkad shaqaalaysiin waxay shaqaale ka kireeyaan shirkado kala duwan.
Waxaad la xiriiri kartaa shirkadaha shaqaalaha qora. Shirkad shaqaale qortaa waxay dad u heshaa shirkad doonaysa ina shaqaalaysiiso shaqaale cusub.
Waxaad ka jawaabi kartaa xayaysiisyada joornaalada maalinlaha ah ama ku yaala Intarnatka.
Waxaad la xiriiri kartaa shaqo bixiye.
Waxaad weydiin kartaa dadka aad garanayso.
Miyaad isticmaashay Xafiiska Shaqada boggiisa intarnatka?
Maxaa shaqooyin banaan ka jira meesha aad ku nooshahay?
Adigu waxaad caawimaad ka heli kartaa adeega Hitta yrke haddii aanad hubin nooca xirfad ee kugu haboon ama waxa xirfadaada micnaheedu ka yahay gudaha Iswiidhan. Hel xirfada waa adeeg dijitaal ah oo Xafiiska Shaqada ay soo saartay.
Gudaha adeegan Hitta yrken waxaa ku jira macluumaad ku saabsan:
Hitta yrken wuxuu leeyahay qayb si ootomaatig ah ugu turjunta luqado dhowr ah oo kala duwan.
Waa maxay fikradaha aad ka qabto nolosha shaqada ee Iswiidhan oo waa noocee xirfadaha adigu aad xiiseynayso?
Waxbarasho waxay keen kartaa shaqo
In wax la barto waxay ahaan kartaa qaab lagu kordhiyo fursadaha dhinaca shaqo. Waxaa jira noocyo badan oo waxbarasho. Dhinaca jaamicad ama jaamicad sare waxaad ku baran kartaa xirfado badan, tusaale ahaan macallin, dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad.
Adigaaga horey u haystay waayo-aragnimo ama waxbarasho dhinaca xirfad waxaad u baahan kartaa inaad ku dhammaystirto waxbarasho kooban si aad u awooddo inaad wax la mid ah kaga shaqayso gudaha Iswiidhan.
Dhinaca xirfadaha ay ka jirto baahi weyn oo shaqaale waxaa jirta waxa lagu magacaabo jidka dhakhsaha ah. Waa jid dhakhso ah kuna aadan shaqo oo loogu talogalay adigaaga horey u haystay waayo-aragnimo ama waxbarasho dhinaca xirfad.
Waxaa jira xitaa waxbarashooyinka suuqa shaqada. Waa waxbarashooyin kooban, ku jiheysan xirfado ah xirfadaha ay ka jiraan gabaabsi dhinaca shaqaale haysta waxbarasho.
Dhinaca Xafiiska Shaqada boggiisa intarnatka ayaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan jidka dhakhsaha ah.
Dheeraad ku saabsan waxbarashooyinka kala duwan ka akhri bogga ”Waxbarashada dadka waaweyn” kuna qoran Informationsverige.se.
Miyaad leedahay waxbarasho ama waayo-aragnimo xirfad taas oo aad u baahantahay in la qiimeeyo?
Haddii aad haysato waxbarasho aad ku soo dhammaysay dalka dibediisa oo heer dugsi sare, ka dib dugsi sare ama heer jaamicadeed ama waxbarasho xirfad waxaa waxbarashadan kuu qiimeyn karta Guddida jaamicada iyo jaamicadaha sare boggooda intarnatka. Qiimeyntan waa bilaash.
Akhri dheeraad ku saabsan qiimeynta waxbarasho dalka dibediisa ah kuna qoran Guddida jaamicada iyo jaamicadaha sare boggooda intarnatka.
Tusaale: Alireza waa inuu helo in waxbarashadiisa la qiimeeyo
Alireza wuxuu haystaa waxbarasho kalkaaliye caafimaad oo uu kaga soo shaqeeyay Iiraan tobban sano. Isagu wuxuu Iswiidhan yimi hal sano ka hor oo imminka wuxuu rabaa inuu ku shaqeeyo wax la mid ah halkan. Si uu taas u sameeyo wuxuu u baahanyahay in loo aqoonsado inuu kalkaaliye caafimaad ka yahay gudaha Iswiidhan.
Alireza wuxuu la xiriiray Maamulka arrimaha bulshada si waxbarashadiisa uu ka helay Iiraan loogu ansaxiyo. Maamulka arrimaha bulshada waxay Alireza waxbarashadiisa barbardhigtay waxbarashada Iswiidhishka si loo eego haddii ay is waafaqsanyihiin. Haddii waxbarashadan ay ansax noqonto wuxuu helayaa aqoonsi oo wuxuu raadin karaa shaqo kalkaaliye caafimaad ahaan ah gudaha Iswiidhan. Haddii aan la ansaxin waa inuu dhammaystiro waxbarashadiisa.
Haddii shahaadadaada dalka dibediisa la qiimeynayo waa in marka hore loo turjumo Iswiidhis. Turjumiddan waa inuu sameeyo turjubaan haysta aqoonsi turjubaan. Xafiiska Shaqada wuxuu kaa caawin karaa in shahaadada laguu turjumo. Haddii shahaadadu ku qorantahay Ingiriisi, Faransiis, Jarmal, Isbaanish ama luqaddaha dalalka waqooyiga Yurub ma loo baahna in la turjumo.
Akhri dheeraad ku saabsan qiimeynta iyo turjumidda shahaado dalka dibediisa ah kuna qoran bogga "Haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah" ee Informationsverige.se.
Xaaladaha saamayn ku yeelan kara awooddaada shaqo ama waxbarasho waxaa ka mid noqon kara:
Akhri dheeraad ku saabsan taageerada dhinaca hoos u dhaca awoodda laxaadka kuna qoran Xafiiska Shaqada boggeeda intarnatka
Xafiiska Shaqada boggiisa intarnatka waxaa laga helayaa warbixin ku saabsan sida aad u qoraysid CV:ga.
Su’aalo noocee ah ayaa lagu weydiin karaa?
Miyaad ogtahay sida aad isugu diyaarinayso wareysi shaqo?
Takooridda xilliga raadinta shaqo
Marka aad codsato shaqo waa in si caddaalad ah laguula dhaqmo. Maaha in adiga lagu takooro marka aad raadinaysid shaqo. Taasi waxay ku qorantahay sharciga. Inkastoo ay saas tahay way dhacdaa in dad la takooro marka ay raadinayaan shaqo.
Waxa ah takoorid way kala duwanaan kartaa xaalad ilaa xaalad. Mararka qaarkood waa in maxkamad go’aamiso haddii ay taasi tahay takoorid. Waa tan laba arrimood oo ah takoorid oo go’aan lagaga gaaray maxkamad:
Tusaale: Eva may helin shaqo sababtoo ah inay tahay haweenay
Eva waxay shaqo ka raadisay dukaan raashin oo way timi wareysigi shaqada. Intii lagu jiray wareysiga ayaa qofka madaxda ahi in aanay heli karin shaqadan sababtoo ah inay tahay haweenay. Qofka madaxda ah ayaa ku micneeyay in uu hadal badan jiri doono haddii ay noqdaan haween badan oo jooga goobta shaqada. Shaqadi waxaa la siiyay nin. Maxkamad ayaa dukaanka raashinka ku xukuntay inay takooreen Eva.
Tusaale: Nadiira may doonayn inay samayso gacan qaad – waa loo diiday shaqo
Nadiira waxay raadsatay shaqo turjubaan ah oo way timi wareysigi shaqada. Markii Nadiira timi wareysiga waxay ninkii madaxda ahaa ku salaantay iyadoo gacan saartay laabteeda. Iyadu may doonayn inay gacan qaado qofka madaxda ah sababtoo ah inuu ahaa nin. Markaas ayaa qofki madaxda ahaa joojiyay wareysigii oo sheegay in salaan farqi ku kala samaysa ragga iyo haweenka ay tahay mid sharaf ridid ah oo ay keeni karto dhibaatooyin ka dhaca goobta shaqada. Maxkamad ayaa ku xukuntay qofka madaxda ah inuu takooray Nadiira. Maxkamaddu waxay ku micneysay in qofka madaxda ah aanu shuruud kaga dhigi karin Nadiira inay ku khasbantahay inay u salaanto qaab gaar ah.
Haddii adiga laf ahaantaada lagu takooro
Haddii aad u aragto in lagu takooray waxaad tusaale ahaan la xiriiri kartaa xafiiska ka hortaga takooridda si aad u hesho talobixin iyo taageero. Adigu waxaad xitaa warbixin iyo ashkato u gudbin kartaa Wakiilka xagga takoorka.
Haddii aad xubin ka tahay urur shaqaale waxaad la xiriiri kartaa iyaga si aad u hesho talobixin iyo caawimaad.
Akhri dheeraad ku saabsan takooridda kuna qoran bogga "Takoorid" ee Informationsverige.se.